कृष्णचन्द्र नेपाली : शिक्षक, वकिल हुँदै मुख्यमन्त्री - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री
कृष्णचन्द्र नेपालीको जिवनी
बाबु गोबद्र्धन र आमा दौपदा शर्माको माइलो सन्तानको रुपमा बिस २००६ सात मंसिर १३ गते तनहुँमा उनको जन्म भएको हो ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकै कारण पिता गोवद्र्धन निर्वासनमा बसेका थिए । त्यति नै बेला अर्थात् २०२२ देखि २०२८ सालसम्म उनले पनि पिताकै साथमा भारतमा निर्वाासित जीवन बिताए । राजनीतिमा मात्र होइन उनी लामो समय शिक्षण पेसामा समेत क्रियाशील रहे । काभ्रे र तनहुँका स्कुलमा उनले लामै समय पढाए । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलको प्रचारमा सक्रिय थिए । जनमत संग्रहमा कांग्रेसको पक्षमा लागेर हिँडेकै आरोपमा उनलाई तत्कालीन सरकारले जुम्ला सरुवा गरिदियो । त्यसपछि उनले शिक्षण पेसा छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा संलग्न रहे ।
जेठा दाजु रामचन्द्र पोखरेल संविधानसभा सदस्य हुन् । जिल्ला विकास समिति तनहुँ पूर्व सभापति भइसकेका उनले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा लामै समय सचिवको जिम्मेवारी पनि पाए । साइँला भाइ डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । कान्छा भाइ डा. सुवाशचन्द्र अमेरिका बस्छन् ।